Ogaden News Agency (ONA) – Dhibaatadii lagu hayay dadweynaha oo u gudubtay Jigjiga
Dhibaatadii lagu hayay dadweynaha oo u gudubtay Jigjiga
Posted by ONA Admin	/ April 23, 2011
Dhibaatadii dhaca iyo dilka ah ay ku hayeen ciidamada Itobiya iyo maxaysatada Cabdi ilay dadweynaha reer guuraaga ah iyo kuwa dagan tuulooyinka oo haya’da badan oo caalami ah ay ka hadleen iyo saxaafadda caalamka ayaa hadda u soo gudbtay gaar ahaan Jigjiga iyo inta ka sareysa . Waxaa ka mid ah arimaha ay aad u hadal hayaan dadka reer Jigjiga dhacdo naxdin leh oo habeen dhaweyd ay ku dhinteen sida ay sheegay dad badan.
Ciidamada loogu talagalay inay xoojiyaan cunaqabataynta ayaa la sheegayaa inay goor habeen ah ka soo qabteen duleedka magaalada Jijiga gaadhi u rarnaa qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka. Gaadhigan ayuu darawalkii waday lafihiisa uga baxsaday isagoo ka cabsaday in ay dilaan ciidamadan qofka ay doonaan ku doogta magaalada dhexdeeda.
Ka dib mid ka mid ahaa askarta ayaa isa soo maqiiqay oo yidhi waan kaxaynayaa halkaasoo markii uu gaadhay kontroolka magaalada dhanka Wajaale iyo Qabribayax uu gaadhigii qaban kariwaayay, kadibna la beegsaday gaadhi kale oo wadada dhinaceeda taagnaa oo uu xaga dambe ka galay. Waxay wararku sheegeen inuu ka dib ku qarxay bambooyinkii ay dhexda ku xidhnaayeen halkaasoo ay ku dhinteen 7ba iyagii ka mid ahaa iyo laba haweenay oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee saarnaa gaadhiga. Waxaa kaloo jira dhaawac farabadan.
Waxay wararku intaa raacinayaan in gaadhigii gadaal laga galay uu isna kusii dhacay gaadhi Bas ahaa oo ay baadhitaan ku samaynayeen ciyaal yar-yar oo la yidhi waxay baadhaaan baabuurta iyo dadka magaalada jijiga dhexdeeda socda iyo kuwa soo galayaba habeen kasta. Waxaa uu baskii la dhaqaaqay rakaabkii halkaasoo ay ku dhinteen 2ba yar-yar oo kamid ahaa ciyaalkii baadhaayay baska.
Guud ahaan dadka halkaa ku dhintay ayay tiradooda lagu sheegey inay gaadhayaan 11 qof oo todoba ka mid ahaa ay ahaayeen ciidankii Wayaanaha halka 4 qofee kale ay ahaayeen dad shacab ah. Shilkan ayaa sidookale sababay dhaawac tirobadan oo qaarkood uu dhaawacoodu halisyahay kuwaas oo hada badidooda la dhigay isbitaalada.
Ciidamadan la yidhi waa faderaal ayay ku sheegeen dadka warkan soo tabiyay inay dhibaatooyin badan ku qabaan dadka somalida ah ee kunool deegaanka, gaar ahaan ganacsatada iyo gaadiidlayda, waxaana lagu eedeeyaa inay jidh-dil iyo garaac u gaystaan darawaliinta iyo dadka shacabka ah ee alaabooyinka kasoo iibsada magaalada Wajaale iyo magaalooyinka kale ee xuduudka ku yaal. Askartan lagu magacaabo Finaaska ee dadweynaha baadha ayaa sidoo kale mararka qaarkoodna rasaas aan lookala aabo yeelin ooda kagaqaada baabuurta ay gaadhiwaayaan amaba ay u arkaan in ay dhaafeen. Arimahan oo caan ka ahaa gobolka waqtiyadii Xayle Salaase iyo Mingusto oo ciidamada marka ay lacag la’aan ku dhacdo soo aadi jirey wadooyinka bal inay ka helaan gawaadhi xadka ka soo gudubtay ayaa hadda dib u bilaabaty.
Lacagta canshuurta ah ee ka soo gali jirtay maamulka Cabdi iley kontroolada xuduuda ayaa aad u badnayd taasoo keentay in saraakiishii Wayanaaha ay la wareegaan gabi ahaanba iyagoo marmarsiinyo ka dhiganaya in kooxda cabdi ilay ay xeer jajab u sameeyaan Somalida oo ay waxyar oo laaluusha ah ka qaataan una soo daayaan hantidooda. Ciidankan Wayaanaha uu keensaday ayaa alaabta ay qabtaan kala wareega dadka ka dibna suuqa si hoos ahaan ah uga iibiya. Waana arin ay isla wadaagaan saraakiisha halkaa joogta iyo kuwa baadha dadweynaha. Jigjiga ayaa noqotay meelaha saraakiisha Wayanaaha kolba midka la doonayo in la naaxiyo loo soo badalo.
waa dhibaatadii gumaysigu ku hayey dadka reer Ogaadeeniya mid ka mid ah tani.
allaah ha u hiiliyo shacabkan masaakiinta ah.
waa laga baxayaa insha allaah,
INTAY JWXO SOO GALI JIG-JIGA JAAHIL HA U TALYO ….